Archive du 20180410
Vidin-tsolika niakatra Hamono vahoaka ny fitondrana..
Nisondrotra indray ny vidin-tsolika, ka 70 Ar isaky ny litatra izany ho an’ny lasantsy sy ny gazoala ary 30Ar kosa ho an’ny solika fandrehitra.
Voninahitsy Jean Eugène Niverina nitaingina soavaly be tongotra…
Miverina amin’ny naloany ! Izay no hanasokajian’ny maro ny fihetsiky ny mpanao politika Voninahitsy Jean Eugène ankehitriny. Niverina tanteraka ao am-balan’ny fitondrana mantsy ny tenany, izay hita tetsy amin’ny Lapan’ny fanatanjahantena Mahamasina nandritra ny hetsika “Rodoben’ny fisandratana” nataon’ny HVM tamin’ny sabotsy teo.
Mafana ny raharaham-pirenena Misitri-belona ny vovonana politika
Aiza daholo ry Rodoben’ny Malagasy tia tanindrazana ho amin’ny fanorenana ifotony (RMTF), ny tolona fanorenana ifotony (TFI) sy ireo mpanao politika nitabataba rehetra nitaky ny fametraham-pialan’ny mpitondra tamin’ny fotoan’androny ?
Fivorian’ny depiote Mitohy hatrany ny fandaniam-bola
Nanomboka tamin’ny zoma indray ny fivoriana tsy ara-potoana fahefatra eny amin’ny antenimieram-pirenena.
Lalàna mifehy ny fifidianana Holaniana anio etsy amin`ny Antenimierandoholona
Rehefa avy nandalo sy nasiam-panitsiana tamin’ny asam-baomiera ireo volavolan-dalàna mikasika ny rafitra sy fepetra mifehy ny fifidianana nanomboka ny sabotsy lasa teo dia hodinihina sy holaniana eo anivon`ny mpikambana ao amin’ny Antenimierandoholona anio talata 10 aprily 2018.
Fikotrehana korontana Tsy azo ekena, hoy ny Kung fu
Nohamafisin’ny mpanao kung fu tarihan’ny Grand Maitre Avoko nandritra ny fihaonambe fankalazana ny faha-38 taonan’ny kung fu wisa tany Antsirabe farany teo fa tsy azo ekena ny fikononkononana korontana eto Madagasikara, indrindra fa ny ao Antsirabe ary dia hanambatra ny heriny izy ireo hanoherana izany raha sanatria ka misy alaim-panahy hamboly korontana.
Niaro tena mafy ny Praiminisitra “Tsy very vola 12 miliara izany aho”
Nanda ankitsirano ny vaovao navoakan’ny haino aman-jery samihafa momba ny fahaverezana volabe 12 miliara ariary tao an-tranony ny Praiminisitra Mahafaly Solonandrasana Olivier omaly. Raha ny vaovao niely moa dia hoe notehirizina tao an-tokantrano izy io no nangalarin’ny mpanampy, ary efa hatry ny faran’ny herinandro teo no nivoahan’io resaka io.
Toerana fiandrasana taksibe Lasa fialokalofan’ny tsy manan-kialofana sy ny adala
Zary lasa fandrianan’ireo tsy manan-kialofana eto an-drenivohitra sy fipetrapetrahan’ny adala avokoa ny ankamaroan’ireo toerana fiandrasana taksibe eto an-drenivohitra tato ho ato na ny “abribus”.
Mpiasan’ny onjam-peo VIVA Voantsindron’antsy vao maraina
Naratra mafy vokatry ny herisetra nataona olon-dratsy maromaro azy i Aina na Animajay, teknisianina sady mpanentana fandaharan’ny onjam-peo Viva omaly vao maraina.
Ranon’Ikopa Fatina tovovavy hita nifatotra
Tovovavy iray no hita faty teny amin'ny ranon'Ikopa omaly. Tsy fantatra ny momba azy fa raha ny fitafiany tamin’ny alalan’ny aron’akanjo nanaovany, dia mety ho mpianatry ny lisea ny tenany.
ASIEF Nosokafana ofisialy ny taom-pilalaovana 2018
Na dia efa nanomboka 2 volana teo ho eo aza ny fifaninanana ASIEF (Association Sportive Interministérielle pour l'Entretien des Fonctionnaires) solon’ny ASOIMI teo aloha, dia ny sabotsy 7 aprily teo, teto Analamanga teny amin’ny kianja HJRA Ampefiloha, no nanokafana manetriketrika tamin’ny fomba ofisialy ny taom-pilalaovana 2018 ho azy ireo.
Mafibe No Drug – Ong Ny Sahy Ny Rca Ambatobe no nandroaka ny omby
Ny ekipan’ny Rca avy eny Ambatobe tamin’ireo ekipa 8 nandray anjara (Ajs Tsarahonenana, As B52 Ankadindramamy, As Jayah Ambanivato, Ass Soamanandrariny, Cousin Sports Ambohimahitsy,
Rugby Top 6 de l’Océan Indien 2018 Lavon’ny Ftm Manjakaray ny Curpipe Maurice
Taorian’ny ady sahala 20-20 nifanaovany tamin’ny Etang Salé Rugby Club avy atsy La Réunion tamin’ny andro faha-3 notontosaina ny 01 aprily teo tetsy Mahamasina dia nitohy indray ny fahombiazan’ny ekipa Malagasy, ny Ftm Manjakaray eo amin’ny fifaninanana lalao rugby Top 6 de l’Océan Indien ka ny alahady teo tetsy Mahamasina ihany dia lavony tamin’ny 56-16 ny Highlan Blues Curpipe Starlight avy atsy Maurice.
Dia asa fotsiny re e…
Ambohimahadizina, io no tananan’ny revy rehetra hoy ilay manakanto iray izay.Mby miverina ao an-tsaina izany rehefa mandinika ny zava-misy eto Madagasikara amin’izao fotoana.
Ady amin’ny gripa sy ny kohoka Tokony ho tratry ny rivotra sy ny masoandro ny trano hipetrahana
Ao amin’ny trano hipetrahana, indrindra fa ny efitrano fatoriana no tena fototry ny fahasalaman’ny olona, hoy ny dokotera Fidy Bariniaina. Mihamahazo vahana ny gripa sy ny kohoka ankehitriny ka tokony hitandrina ny rehetra.
Entana vita Malagasy Tokony homena vahana hatrany
Vitsy dia vitsy ny Malagasy mampiasa ny vokatra vita eto Madagasikara mihoatra noho ireo hafarana avy any ivelany. Antony iray tsy hivelaran’ny orinasa Malagasy io.
Telo volana fahatelo Vita amin’ny volana jona ny fandaharam-pianarana rehetra
Miomana fatratra amin’ny fiatrehana ny telo volana fahatelo ny sekoly rehetra manerana ny Nosy ankehitriny.
Ady amin’ny tsy fandriampahalemana Ho hita eo indray ary
Nosokafan’ny praiminisitra Mahafaly Olivier tamin’ny fomba ofisialy omaly teny Mahazoarivo ny Atrikasa hijerena paikady mahomby sy maharitra mahakasika ny tsy fandriampahalemana manerana ny Nosy.
Fanazavana faran’izay tsy misy dikany no nentin’ny minisitry ny angovo omaly mahakasika ny fiakaran’solika ho fitopolo ariary, izany hoe 4000 Ariary ny lasantsy ary 3.350 ariary gazoala.
Ny 29 aprily izao no fotoana miaraka amin-dry zalahy ao amin’ny tarika Mahaleo sy ireo andriambavilanitry ny feo manga malagasy hivetso ny hiran’ireto zokibe ireto.
Fianakaviana 88 isa ao amin’ny Fokontany Vahilava, ao anatin’ny Kaominina Soavina Atsimondrano no mitaraina amin’izao fotoana izao, fa nanomboka tamin’ny 28 martsa dia nesorina an-tery tamin’ny toerana nonenany na efa 30 ka hatramin’ny 50 taona aza no nipetrahana teo.
Nosokafan’ny minisitra Andriamosarisoa Jean Anicet ofisialy tamin’ny alahady 8 aprily teo tetsy amin’ny Lapan’ny fanatanjahantena Mahamasina ny Top 8 lahy sy vavy amin’ny basket fiadiana ny Amboaran’ny Filoha 2018.
Sosialim-bahoaka Tsy laharam-pahamehana ho an`ny fanjakana
Mbola sahy minia manakipy maso ve ny fitondrana ankehitriny amin`izao toe-draharaham-pirenena amin`izao ? Tafalatsaka ao anaty fahantrana ny Malagasy ankehitriny.
Manankarena sy mahantra Be loatra ny elanelana eto Madagasikara
Ukraine no firenena manana elanelana ambany indrindra ny amin’ny mahantra sy ny manankarena eto ambonin’ny tany. Tarafina amin’ny vola miditra amin’ny tsirairay izany izay hita ho mitovitovy daholo.